Izixhobo ezi-10 zokubeka iliso kwiBrand onokuthi uqalise ngazo zasimahla | Martech Zone
Ukuthengisa yindawo enkulu yolwazi ngamanye amaxesha kunokuba nzima. Kuvakala ngathi kufuneka wenze isixa sezinto ezihlekisayo ngaxeshanye: cinga ngesicwangciso sakho sentengiso, cwangcisa umxholo, gcina iliso kwi-SEO kunye nentengiso yemidiya yoluntu kunye nokunye okuninzi.
Ngethamsanqa, kuhlala kukho imartech ukusinceda. Izixhobo zokuthengisa ungasusa umthwalo emagxeni kwaye uzenzele izinto eziyindinisa okanye ezinganiki mdla zentengiso. Ngapha koko, ngamanye amaxesha banokusinika ulwazi esingenakufumana ngayo nayiphi na enye indlela- kanye njengokwenza esweni uphawu.
Yintoni ukuJonga uBrand?
Ukubeka iliso kwiBrand yinkqubo yokulandelela iincoko ezinxulumene nemveliso yakho kwi-intanethi: kwimidiya yoluntu, iiforamu, uphononongo lokudibanisa, iiwebhusayithi, njalo njalo. Ezinye iziteshi ezikwi-Intanethi, njengamaqonga amajelo eendaba ezentlalo umzekelo, vumela abasebenzisi ukuba bathathe uphawu kwiimpawu zokutsala umdla wabo. Kodwa nezo zikhankanyiweyo zinokuphoswa ngokulula kwingxolo yemidiya yoluntu.
Ngenani lezitishi ezikwi-Intanethi esinazo, akunakwenzeka ukuba kulandelwe yonke into ngesandla. Izixhobo zokubeka iliso kwiBrand zikunceda ulandele umkhondo wenkampani yakho ekwi-intanethi, jonga igama lakho, hlola abakhuphisana nabo njalo njalo.
Kutheni ufuna ukuJongwa kweBrand?
Kodwa ngaba ngenene kufuneka ubeke esweni abanye ukuba bathini ngophawu lwakho kwi-Intanethi? Ewe uyakwenza!
Ukubeka iliso kwi-brand yakho kukuvumela ukuba:
Ukuqonda ngcono abaphulaphuli ekujoliswe kubo: unokufumana ukuba ngawaphi amaqonga eendaba ezentlalo kunye neewebhusayithi abazisebenzisayo, zeziphi iilwimi abazithethayo, apho bahlala khona, njl.
Qaphela ukuba yintoni amandla kunye neentsilelo zorhwebo lakho. Xa usenza esweni uphawu unokufumana izikhalazo zabathengi kunye nezicelo kwaye ubone indlela yokuphucula imveliso yakho.
Khusela ifayile yakho uphawu lophawu ngokuchasene nengxaki ye-PR. Ngokufumana ngokukhawuleza ukukhankanywa kakubi kwegama lakho unokujongana nalo kwangoko ngaphambi kokuba kujike kube yingxaki yemidiya yoluntu.
Fumana amathuba okuthengisa: fumana amaqonga amatsha, amathuba e-backlink, kunye noluntu oza kuthengisa kulo.
Fumanisa abachaphazeli abafuna ukusebenzisana nawe.
Kwaye sisiqalo nje eso. Izixhobo zokubeka iliso kwiBrand zinokukwenza konke oku kunye nokunye-kuya kufuneka ukhethe eyona ilungileyo kwishishini lakho.
Izixhobo zokubeka iliso kwiBrand ziyahluka kubuchule bazo, ezinye zijolise kuhlalutyo, ezinye zidibanisa ukubeka iliso kunye nokuthumela kunye nokucwangcisa amanqaku, ezinye zigxile kwiqonga elithile. Kolu luhlu, ndiqokelele uninzi lwezixhobo zalo naziphi na iinjongo kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Ndiyathemba ukuba uyakukwazi ukufumana efanelekileyo.
Zonke izixhobo zokubeka iliso kolu luhlu zisimahla okanye zinikezela ngesilingo sasimahla.
Awario sisixhobo sokumamela ekuhlaleni esinokujonga amagama akho aphambili (kubandakanya negama lakho) ngexesha lenene. I-Awario lukhetho olufanelekileyo kwiinkampani ezincinci neziphakathi kunye neearhente zentengiso: ibonelela ngohlalutyo olunamandla ngexabiso elifikelelekayo.
Ifumana konke ukukhankanywa kwegama lakho kwimidiya yoluntu, kwimithombo yeendaba, iibhlog, iiforamu nakwiwebhu. Kukho iseti ecociweyo yeefilitha ezikuvumela ukuba wenze esweni ngokuchanekileyo ngakumbi kwaye Imowudi yokukhangela yeBoolean ukukunceda wenze imibuzo ethile. Oku kunokukunceda ukuba igama lakho lebrendi sisibizo esiqhelekileyo (cinga iApple).
Nge-Awario ufikelela kulowo ukhankanyiweyo kwi-Intanethi nakwi-analytics yezi zinto zikhankanyiweyo. Isixhobo sikunika idatha yedemokhrasi kunye nokuziphatha kubantu abaxoxa ngophawu lwakho, ekuvumela ukuba uthelekise iimveliso zakho kubakhuphisana nabo kwaye unike ingxelo eyahlukileyo yabachaphazeli abakhankanya uphawu lwakho.
Ungaseta i-Awario ukuze ikuthumelele izaziso ngokukhankanywa ngokutsha nge-imeyile, ukuyekelela, okanye ukutyhala izaziso.
Amaxabiso: $ 29-299 xa uhlawulwa ngenyanga; Izicwangciso zonyaka zikongela iinyanga ezi-2.
Isilingo sasimahla: Iintsuku ezisi-7 zesicwangciso sokuqala.
Umculi weNtlalo lukhetho olukhulu kwabo banomdla ngakumbi ekusebenzeni ngokukhankanywa komntu ngamnye. Yinkqubo ekulula ukuyisebenzisa yewebhu ekubonelela ngokukhankanywa kwegama lakho kwinkoliso yemithombo kubandakanya i-Facebook, iTwitter, iReddit, iYouTube nokunye.
Uncedo lokuqala loMkhangeli weNtlalontle uyilo lwayo olunomdla-xa usiya kwiwebhusayithi esemthethweni ubuzwa ngokukhawuleza ukuba ufake amagama akho aphambili kwaye uqalise ukubeka esweni. Awudingi nokuba ubhalise nge-imeyile. IsiKhangeli seNtlalontle sithatha ixesha elincinci lokufumana ukukhankanywa kwaye emva koko sikubonise ukutya kugcwele ukukhankanywa kwimithombo eyahlukeneyo. Unokucofa kwithebhu yohlalutyo ukubona ukonakala kokukhankanywa yimithombo, ngexesha ababethunyelwe ngalo, nangemvakalelo.
Isikhangeli seNtlalontle lukhetho olukhulu ukuba ufuna ukukhangela ngokukhawuleza ukukhankanywa kwegama eliphambili kwi-intanethi. Ukuba ufuna ukuba nenkqubo yokujonga uphawu lwentengiso, mhlawumbi jonga kwezinye izixhobo ezine-UI efanelekileyo.
Amaxabiso: asimahla, kodwa ungahlawula isicwangciso (ukusuka kwi- € 3., 49 ukuya kwi- € 19.49 ngenyanga) ukuseta izilumkiso ze-imeyile kunye nokubeka esweni okungaguqukiyo.
Isilingo sasimahla: isixhobo simahla.
Iingqondo sisixhobo solawulo lweendaba zosasazo esibonelela ngokujonga uphawu kunye nokusebenza kokushicilela. Kwaye ikwazile ngokugqibeleleyo ukwenza zombini ezi zinto.
Ivumela ukutsiba kwiincoko ezifumana ngexesha lokwenyani kunye nokunxibelelana nabasebenzisi beendaba zosasazo. Iyakwazi ukulandelela uphawu lwakho kokubini kwimidiya yoluntu nakwiwebhu nakwiilwimi ezingaphezu kwama-20.
Yintoni eyenza ukuba i-Mentallytics ivelele nguMcebisi ngezeNtlalontle. Yinkonzo ye-AI efumana ukuqonda okunokuvela kwidatha yezentlalo. Umzekelo, ukuba ujonge uphawu lwakho, ngokuzenzekelayo luyakwazi ukufumana amanqaku aphambili kubathengi bakho kwaye lubalaselise kuwe.
Ukongeza kuloo nto, i-Mentallytics ibonelela ngohlalutyo ekufikeleleni kunye nefuthe lokukhankanyiweyo okufumanekayo, ukubeka esweni ukhuphiswano, kunye nemowudi yokukhangela ye-Boolean.
Amaxabiso: ukusuka kwi- $ 39 ukuya kwi- $ 299 ngenyanga.
Uvavanyo lwasimahla: isixhobo sibonelela ngesilingo sasimahla seentsuku ezili-14.
Tweetdeck sisixhobo esisemthethweni esivela ku-Twitter ukukunceda ulawule ngokukuko. Ideshibhodi ihlelwe kwimilambo ukuze ulandele ukutya, izaziso kunye nokukhankanywa kweeakhawunti ezininzi ngaxeshanye.
Ngokumalunga nokubeka iliso kwi-brand, unokuseta umsinga "Seach" oya kuthi uhambise konke ukukhankanywa kwegama lakho elingundoqo (igama lebrendi okanye iphepha lakho lewebhu) kwideshibhodi yakho. Isebenzisa ingcinga efanayo njengoPhando oluPhucukileyo kwi-Twitter ukuze ukhethe indawo, ababhali, kunye nenani lokuzibandakanya kuseto lokujonga uphawu.
Olona ncedo luphambili lweTweetdeck kukuthembeka kwayo: kuba iyimveliso esemthethweni ye-Twitter, unokuqiniseka ukuba ifumana ZONKE izinto ezikhankanyiweyo kwaye azisayi kuze zibe neengxaki zokudibanisa ne-Twitter.
Icala elisezantsi kukuba lijolise kwiqonga elinye kuphela. Ukuba i-brand yakho ine-Twitter esekwe kwaye ifuna isisombululo simahla ukuyibeka iliso, i-Tweetdeck lukhetho olufanelekileyo.
Unokumangaliswa kukubona SEMrush kolu luhlu-emva kwayo yonke loo nto, ngokuyintloko yaziwa njengesixhobo se-SEO. Nangona kunjalo, inamandla okubeka iliso kwi-brand, okokuqala nokuphambili, ijolise kwiiwebhusayithi, kunjalo.
Esi sixhobo sibonelela ngokutya okunomdla kokukhankanywa apho ungasebenza khona ngeposi kunye nephepha ngalinye, uliphawule kwaye uleyibhelishe, kwaye ucofe iziphumo zomfanekiso ochanekileyo. Kunye neewebhusayithi, i-SEMrush ikwajonga i-Twitter kunye ne-Instagram.
Kuba i-SEMrush ijolise kwiwebhusayithi, ibonelela abasebenzisi ngesakhono sokujonga imimandla ethile. Oku kunokuba luncedo ngakumbi ekubekweni kweliso kwimithombo yeendaba ezinxulumene nomzi-mveliso okanye iwebhusayithi ethile yokujonga kwakhona apho uphawu lwakho luxutyushwa kakhulu.
Ngaphaya koko, i-SEMrush sisixhobo esinqabileyo esinokulinganisa ukugcwala kwetrafikhi kwizikhombisi ezikwi-Intanethi eziqulathe amakhonkco- ukudityaniswa kwayo noGoogle Analytics ikuvumela ukuba ulandele konke ukucofa kwiwebhusayithi yakho.
Amaxabiso: ukubeka esweni uphawu lwentengiso kufakiwe kwisicwangciso seGugu esixabisa i-199 yeedola ngenyanga.
Isilingo sasimahla: kukho uvavanyo lweentsuku ezi-7 zasimahla olukhoyo.
Thetha yinkampani yaseFrance ezinikele ekubekweni esweni nasekumameleni iincoko ezikwi-Intanethi. Igqibelele kwiinkampani eziphakathi kunye ne-Enterprise-level brand kuba ibonelela ngeendlela ezininzi zokuhlalutya kunye nokudityaniswa nezinye izixhobo zokujonga uphawu olomeleleyo.
Ibeka ukubaluleka okukhulu kukhangelo lwexesha lokwenyani- ngokungafani nezinye izixhobo ezikolu luhlu (iAwario, iBrandwatch) inikezela ngedatha yeembali (okt zikhankanyiweyo ezindala kuneveki) njengezongezo. Ikhupha idatha kwi-Facebook, Instagram, Twitter, iiforamu, iibhlog, iividiyo, iindaba, iwebhu, kunye nerediyo kunye neTV ukuqinisekisa ukuba uhlala unolwazi ngazo zonke iincoko ezenzekayo malunga nophawu lwakho.
Isixhobo esweni sokujonga uphawu sinika ideshibhodi eneenkcukacha zohlalutyo ngazo zonke iintlobo zemetriki kubandakanya isini, uhlalutyo lweemvakalelo, ukufikelela njalo njalo. Inokudityaniswa kwe-API ekuvumela ukuba wakhe ii-analytics zakho kwisixhobo sakho okanye kwiwebhusayithi.
Amaxabiso: sisixhobo simahla ukuya kuthi ga kwi-1,000 ekhankanyiweyo. Ukusuka apho, amaxabiso aqala kwi- $ 25 ngenyanga.
Isilingo sasimahla: Ukuthetha kunika isilingo sasimahla seentsuku ezili-14 kwizicwangciso ezihlawulelweyo.
Buzzsumo sisixhobo sokuthengisa umxholo ke ngoko ukujonga uphawu lwentengiso kunokuba nomdla okhethekileyo kula mabrendi abeka umxholo phambili.
Isixhobo sikuvumela ukuba ulandelele wonke umxholo okhankanya uphawu lwakho kunye nohlalutyo lokuzibandakanya macala onke omxholo. Inika inani lezabelo kwimidiya yoluntu, inani lezinto ozithandayo, ukujonga kunye nokucofa. Ikwabonisa amanani apheleleyo ophando lwakho.
Ngokumisela izilumkiso ungahlala unolwazi ngenqaku elitsha ngalinye kunye neposti yebhlog ekhankanya uphawu lwakho. Unokwenza izilumkiso zokulandela umkhondo wegama lophawu, ukukhankanywa kukhuphiswano, umxholo ovela kwiwebhusayithi, ukukhankanywa kwamagama aphambili, i-backlinks, okanye umbhali.
Amaxabiso: amaxabiso aqala kwi- $ 99.
Uvavanyo lwasimahla: kukho uvavanyo lweentsuku ezingama-30 zasimahla.
Umntu othetha naye
Umntu othetha naye inegama kuluntu lokuhlalutya imidiya yoluntu - ithathwa njengeyona nto iphambili ekuphulaphuleni nasekubekeni esweni izixhobo. Kwaye kufanelekile!
Isixhobo esikwinqanaba lamaShishini kumaqela amakhulu entengiso aneedeshibhodi ezininzi zohlalutyo kunye nokuqonda okusekwe kwi-AI. I-Talkwalker ihambisa idatha ngexesha lokwenyani kodwa ikwaqokelela kwaye ihlalutye ukukhankanywa kweempawu ezibuyela umva ukuya kwiminyaka emibini. Inye into eyahlukileyo kwiTalkwalker evela kukhuphiswano lwayo kukubonwa kokubonakalayo: isixhobo siyakwazi ukufumana uphawu lwakho kwimifanekiso nakwividiyo kwi-Intanethi.
I-Talkwalker ifumana idatha kwi-10 yenethiwekhi yemithombo yeendaba kubandakanya ngakumbi ezingaziwayo njengeWebo kunye neTV kunye neendaba zikanomathotholo.
Amaxabiso: $ 9,600 + / ngonyaka.
Isilingo sasimahla: akukho silingo sasimahla, kodwa kukho idemo yasimahla.
Esinye isisombululo senqanaba loshishini kwinqanaba lokujonga iliso Meltwater. Lwamajelo eendaba ezentlalo kunye neqonga lokuhlalutya lokuthengisa elixhomekeke kakhulu kwi-AI ukubonelela ngolwazi olunokwenzeka.
Ijonge ngaphezulu kweendaba zosasazo zasekuhlaleni, kuvavanywa izigidi zezithuba mihla le kumaqonga eendaba ezentlalo, iibhlog, nakwiindawo zeendaba. Ihluza ukukhankanywa okungabalulekanga kwaye inike uluvo kwizinto ezikhankanyiweyo onomdla kuzo
I-Meltwater ibandakanya iideshibhodi ezininzi ezibeka esweni, umlinganiso, kunye nohlalutyo lomsebenzi wakho okwi-Intanethi. Uyakwazi ukuyila iideshibhodi ezikhethiweyo ukuhlangabezana neemfuno zakho ngcono.
Amaxabiso: $ 4,000 + / ngonyaka.
Isilingo sasimahla: akukho silingo sasimahla, kodwa unokucela idemo yasimahla.
INetBase Izisombululo liqonga lobukrelekrele elikhulu elibandakanya ubukrelekrele obukhuphisanayo, ulawulo lweengxaki, ukukhangela itekhnoloji kunye nezinye izisombululo.
Isixhobo sokubeka iliso kwi-brand sihambele phambili- ikuvumela ukuba ulandele uphawu lwakho kwimidiya yoluntu, kwiiwebhusayithi, kunye namajelo eendaba emveli; Chonga izinto eziphambili ezichaphazela uthando lwentengiso ngohlalutyo lweemvakalelo kwaye ubophe yonke le datha kwi-KPIs yakho yeshishini.
Ukongeza kwidatha efunyenwe kwimithombo yeendaba zentlalo, isebenzisa eminye imithombo enje ngesaveyi, amaqela ekugxilwe kuwo, amanqaku, kunye nokuphononongwa, ukufumana okuninzi malunga negama lakho.
Amaxabiso: I-NetBase ayiboneleli esidlangalaleni kumaxabiso amaxabiso, aqhelekileyo kwizixhobo zenqanaba lamashishini. Unokufumana amaxabiso esiko ngokunxibelelana neqela lokuthengisa.
Isilingo sasimahla: unokucela idemo yasimahla.
Luyintoni Usukelo Lwakho?
Ukubeka iliso kwiBrand kuyimfuneko kuyo nayiphi na inkampani, kodwa zeziphi izixhobo oza kuzisebenzisa zixhomekeke kuwe. Jonga uhlahlo-lwabiwo mali, amaqonga ofuna ukuwagubungela, kunye neenjongo zakho.
Ngaba uyafuna ukugxila kwinkcazo nganye yokujongana nezicelo zabathengi kunye nokwandisa ukubandakanyeka? Okanye mhlawumbi ufuna ukuhlalutya abantu ekujoliswe kubo ukuphucula isicwangciso sakho sentengiso? Okanye unomdla kwimpendulo evela kwiiwebhusayithi ezithile okanye uphononongo lokudibanisa?
Kukho isixhobo sayo nayiphi na imfuno kunye nohlahlo-lwabiwo mali, kwaye uninzi lwazo lubonelela ngeenguqulelo zasimahla okanye izilingo zasimahla ke ndiyakukhuthaza ukuba ufumane ezilingana neemfuno zakho kwaye uzame!
hlobo: Martech Zone usebenzisa ikhonkco labo lokudibana SEMrush ngasentla.
tags: awarioukubeka iliso kwi-brandizixhobo zedumela lophawubuzzsumoAmanzi onyibilikayoukubalulaukukhankanyaizixhobo zokubeka ilisonetbasesemrushUkumamela ngokwasentlalweniumphandi kwezentlaloothethayoTweetdeck
U-Anna Bredava yingcali yeNtengiso yezeNtlalontle e Awario. Ubhala malunga nentengiso yedijithali, imeko zosasazo lwentlalo, ukuthengisa amashishini amancinci kunye nezixhobo ezinceda nabani na onomdla kwintengiso.